SAWIRRO:- Xarrig Internet Oo Isku Xiraya Muqdisho iyo Boosaaso Oo soo Gaaray Galmudug. – Kismaayo24 News Agency
by Ahmed sudani 4th May 2018 078
Waxaa Deegaanada Galmudug soo gaaray xarrigga internetka ee Fiber Optic Cable, Waxa uuna hadda marayaa deegaanka Dagaari ee gobolka Mudug. Xariggan ayaa la filayaa in la gaarsiiyo magaalada Muqdisho.
Xariggan ayaa laga soo jiiday xeebta Magaalada Boosaaso, waxaana maalgaliyey shirkada isgaarsiinta Hormuud, ilo xog-ogaal ah ayaa inoo xaqiijiyey in Hormuud xariggan ay ku maalgalisay lacag kor u dhaafaysa 200 Milyan Dollarka Maraykanka.
Waa Markii ugu horeysay ee xarigga internet xawaarihiisu dheereeyo la soo gaarsiiyo deegaanada Galmudug. sidoo kale waxaa la filayaa sidoo kale xarigga kale laga soo jiido xeebta magaalada Hobyo, mashruucaan ayaa yimid kadib markii bartamihii sanadkii tagay 2017 uu internetku ka go’ay Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya, taas oo loo aaneynayo in hal xarig kaliya la keenay Muqdisho, kaas oo ay maamusho shirkadda Dalcom.
Dhacdaas kadib wasaaradda Boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalka ayaa sheegtay in hal xarigga ku filneyn Soomaaliya, loona baahan yahay in ganacsatadu maalgashtaan xarko kale oo internetka Fiber Optic-ka.
Xarigga ayaa markii howl bilaabo waxaa la filayaa in qiimaha internetku hoos u dhaco, sidoo kale la helo internet xaaware sare leh. Soomaaliya ayaa waxaa ka jira tartan ganacsi, waxayna dhanka isgaarsiinta uga horeysaa dalka dariska la ah.
SAWIRRO:- Soomaaliya oo Ka qeyb gashay Shirka iskaashiga dhaqaalaha Afrika iyo Japaan.
SAWIRRO:- Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Oo Gaaray Dalka Jabuuti.
Update: Sargaal Sare oo Shabaab Muhiim u ahaa ayaa Lagu soo bandhigay Dagmada Qoryooley+Magaciisa iyo Howsha uu qaban jiray
admin 15th January 2017 15th January 2017
Qurba-joogta Puntland ee Finland oo Casho Sharaf u Sameysay Wasiir ku Xigeenka Maaliyada ee Maamul Goboledka Koonfur Galbeed (Sawiro)
Maamulka Cusub ee Dagmada Balad Xaawo oo Xilki la wareegay iyo…
admin 31st August 2016